Oromo News 06.24.21 | KWIT
Ummani haala rakkisaa keesan bahan yookin miidha Catholic Iowa akka har’a haasawa godhanitti abukaato walii gala kan isaani erga investigation hime. Netorkin ummata miidhama irraa hafe namicha qeysii church irraa hafe yookin SNAP himatanii jirani abukaato waliigala kan investigation miidha State kan Clergy laalu jiru.
Gabaasni kunnis kan argate ammati himannaa miseensota sadii kan Clergy irra jiru. Jarri martuu waan silaa yakka guddaa harka biyyaati ol bahee godhaniidha. SNAP garuu maqaa dhan ummata kanniin akka hin himamuu fedha.
Jiraattoni Iowa baayiina dalagaa dalagnis May keessa hojii dhabdooni gara 3.9% ol gudattee jira. Iowa workforce Development akka gabasaetti guyyaa kaleesa lakkoofsa nama 3.8% kan April keessa ture ol dabalee jira.
Guyyaa July 4th sanbtaa fi gidirsanbata jiraattoni Iowa erga dhukubni kun dhufee booda guyyaa haara galfumma isaani fudhatan akka tau himan. Dubattuun AAA Iowa akka jetteti akka biyyati guututi nama million 47.7 ta’an guyyaa July 1st fi 5th akka vacation qophaan mullisa.
Dakota County Health Department talaali Covid-19 ummata dhiheesu jirani.
Talaali corona virus Moderna fi Johnson and Johnson guyyaa harba maraa akka beelamaatin Dakota County Health Department, 1601 Broasway St., South Sioux City kan kennamu ta’a.
Talaalidhan brands kuniinnis July 7 Clinic South Sioux City Memorial Hall, 201 W.16 St seati 3 hang 7 P.m July 14 ammoo Clinic Don’s Spot Bar fi Grill, 801 W.13th St, seati 3 hanga 7 p.m kan kennamu akka tae himan.